काठमाडौँको वायु खतरनाक, २४ सै घन्टा श्वास फेर्न अनुपयुक्त, प्रदूषणबाट यसरी बच्न सकिन्छ ! – Saurahaonline.com
काठमाडौँको वायु खतरनाक, २४ सै घन्टा श्वास फेर्न अनुपयुक्त, प्रदूषणबाट यसरी बच्न सकिन्छ !
काठमाडौँ, १० पुष । उपत्यकामा वायु प्रदूषणको दर यतिविघ्न बढेको छ कि यहाँ २४ सै घन्टा श्वास फेर्नलायक वायु उपलब्ध छैन । प्रदूषणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले मानवजीवन प्रत्येक क्षण खतरातर्फ धकेलिँदो छ । सरकारी मापदण्डभन्दा वायु प्रदूषण दर पाँच गुणासम्म बढेको छ ।
स-साना धुलोका कणबाट प्रदूषण बढ्नुमा सवारीसाधन नै जिम्मेवार भएको पाइएको छ । ३६ प्रतिशत प्रदूषण सवारीसाधनका कारण हुने गरेका छन् भने ६० प्रतिशत प्रदूषणमा सवारीसाधन र सडकका धुलो जिम्मेवार छन् । उपत्यकाको वायु अति प्रदूषित रहेकाले अहिले मास्कबिना हिँडडुल गर्नु आफैं खतरा निम्त्याउनु हो । स-साना धुलोको कण फोक्सो हँुदै रक्तनलीसम्म सहजै पुग्दा मानवस्वस्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
– मर्निङ वाकमा जाँदा सडकभन्दा परको खुला स्थान रोज्नु
– मास्क लगाएर हिँडडुल गर्नु
– बिहान ९ बजेभन्दा अगाडि चलहपहल हुने क्षेत्रमा ननिस्कनु
– फोहोर जलाउन नदिनु
– धुलो सरसफाइमा सहयोग गर्नु